Kuyini coleitis atrophic
coleitis Atrophic - isifo esakheka cishe bonke abesifazane emva kweminyaka 1.5-5 emva kokuphela kwenyanga. Ekuqaleni, kukhona izinguquko epithelium we ulwelwesi lwamafinyila, kuba ohlabayo. izindonga lwesitho sangasese sowesifazane babe kalula nozwelo ukucindezeleka mechanical, imiphumela kokuminyaka ukubukeka exudates ketshezi ngegazi. Njengoba umsebenzi zokuzivikela kwezicubu i- kusilela hormone zesifazane, lokhu kuholela okunamathiselwe ukutheleleka yesibili futhi ezingalapheki eside Yiqiniso lesi sifo.
Owesifazane, uma engazala coleitis atrophic azizwa ukulunywa, ukoma futhi ukuncinza e ukudedelwa lwesitho sangasese sowesifazane kanye nephunga edabukisayo. On luhlolo wembula umbala lwamafinyila abomvu, ngobuthakathaka floor kwezitho zangasese, prolapse sangasese, kukhona ubuhlungu ngesikhathi sokuya ocansini futhi lapho ngihlolwa.
izici ngodlame ekuthuthukiseni lesi sifo kukhona amasosha omzimba aphansi, isifo sikashukela, ukuchayeka kwezitho zobulili, ukuya ocansini njalo, menopause HIV and zokwenziwa zangaphansi.
Le nqubo yokwelapha efanele kakhulu futhi ephumelelayo is estrogen replacement therapy e ngemva kokuma ukuya esikhathini Eminyakeni yokuqala. Ukuqala kamuva ukuphathwa kwama-hormone, umphumela ngezansi.
Kungenzeka yini ukuvimbela coleitis atrophic, noma-ke nakanjani kwenzeka kuzo zonke wesifazane ukuya esikhathini? Yebo, bonke abesifazane baye kancane kancane sehle amazinga estrogen, kodwa abaphathi njalo zokwenziwa hormone kugcina amazinga ama-hormone. inhlanzeko yomuntu siqu, uyaphika deodorants, lotions, insipho olunephunga elimnandi kusiza ukuvikela isikhumba kanye nolwelwesi lwamafinyila kusuka iphele ukuphuma.
izihlambi Cool esikhundleni zokugeza hot, ekulweni ukukhuluphala, ukusetshenziswa ingubo yangaphansi eyenziwe ngokotini, ukuvumela ukuvikela nowesifazane ukungavumeli ukuthuthukisa coleitis atrophic. Kodwa okugeza Russian kuyisici kakhulu empilweni ngabantu besifazane abaneminyaka engaphezu engamashumi amahlanu, uma azikho Izimo kule oluthile lwesifo senhliziyo semithambo izifo.
Ukushisa nomswakama exchange izinqubo ukwanda, zishukumisa ukukhiqizwa isikhwehlela, ephumula imisipha futhi sithuthukise kwegazi igazi esikhumbeni futhi nolwelwesi lwamafinyila. Ukuze kuqiniswe imisipha iphimbo kanye kuyaqina yegazi izinqubo ewusizo okungafani, lapho, emva umbhangqwana athululwa emanzini abandayo. Ngakho kukhona bushelelezi imisipha futhi ukuvaleka imithambo yegazi, okuyinto ukuqeqesha zonke izindlela ukuzivikela.
It kubambezela inqubo yoma, kwandisa igazi ligeleze nolwelwesi lwamafinyila, ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana-collagen, isekela kuyaqina kanye nephimbo kwezicubu, futhi ngenxa yalokho, coleitis atrophic alinaso isizathu ukuthuthukisa. Kulula kakhulu ukuvimbela isifo esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe ke.
Abesifazane badinga ukwazi ukuthi ngokusebenzisa amakhambi okwelapha, kungaba kwenziwe ukwelashwa kokuvimbela eside ngaphambi ukuqala nambili kuya kwabadala. Ungakwazi lungiselela decoction we Rhodiola rosea wenze ngenkasa ku odongeni emuva sangasese, futhi kungenzeka ukusebenzisa Lithatha zokugeza efudumele. Ukulungisa umhluzi kufanele uthathe amagremu 100 amakhambi, uthele ilitha lamanzi futhi ubilise imizuzu 10 on ukushisa low. Uma umhluzi selupholile, kubalulekile ukuba ngabasebenzi zisebenzisa njengoba kwakushiwo.
Lapho kutholakala ukuthi uphethwe yini coleitis, ekwelapheni amakhambi abantu kuyinto kwalokho elikhulu yokwelapha kwama-hormone, okuyinto uqoka wezifo zabesifazane. Ekhaya owesifazane angasebenzisa si, suppositories, amaphilisi, futhi ukwenza ngenkasa kanye neensetjenziswa, ukufaka tampons, futhi uthathe zokugeza efudumele.
Positive ithonya yokwamukela nekufakwa celandine. Ukuze wenze lokhu, 1 tbsp. l eluhlaza herbal abilisiwe amanzi. Phakathi isigamu sehora bagcizelele endaweni thermos ke ukuhlunga aphuze kathathu ngosuku.
Ukusebenzisa douches decoction we calendula izimbali kanye chamomile. Ebusuku ungasebenzisa Tampon ne juice enhlaba. Can ochotshoziwe Indaphundaphu Aloe ukugoqa e cheesecloth wafaka shí sangasese ngesikhathi sokulala. Izinqubo ezinjalo zishukumisa izinqubo okuzivuselela e ulwelwesi lwamafinyila, ukunciphisa ukushisa bese moisturize ke.
Ukuze ukuvimbela izifo kufanele ugweme ukucindezeleka, bahlanganyele nokuvivinya umzimba, ukubhema, balandele yokudla. Phezu okuvela menopause ungakhohlwa mayelana replacement therapy, hhayi ukuhlehlisa Ukuvakashela udokotela isikhathi eside.
Isifo sokuwa Focal: amafomu, izimbangela, ukwelashwa. Lapho aphathe isithuthwane eRussia
Isifo sikashukela insipidus. izimpawu
Lymph - kuyini? Kuyini okukushoyo emzimbeni womuntu?
Dynamics amanani kawoyela: kusukela 1990 kuze kube manje
Animal amagciwane: izinhlobo kanye namagama